အရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့်ဆေးဘက်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / အရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့်ဆေးဘက်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
အရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့်ဆေးဘက်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 1 မှတ်ချက် 724 views
အဖြစ်အပျက်များအကဲဖြတ်ရန်, extricate ပိတ်မိနေကြသည်ဟုတစ်ဦးချင်းစီ dispense, နှင့်အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနာကျင်သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအင်္ဂါရပ်များမှနေမကောင်းပုဂ္ဂိုလ်များ.
prehospital options များအတွက်ထိခိုက်သို့မဟုတ်မမှန်တစ်ဦးချင်းစီမှပထမဦးဆုံး-အကူအညီကုထုံးသို့မဟုတ်ဘဝ-ထောက်ခံမှုကုသမှု Give.
ဂီယာ Perform, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာ electrocardiograms များအတွက်အဖြစ် (EKGs), အပိုဆောင်းနှလုံးအကူစက်, သို့မဟုတ်အိတ်အဆို့ရှင်မျက်နှာဖုံး resuscitators, အဆင့်မြင့် lifesupport ဝန်းကျင်မှာ.
အော်တိုနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိရိယာများကိုထိန်းသိမ်းနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်ပထမဦးဆုံး-အကူအညီ tools တွေကို replenish.
မြင်, သမိုင်း, နှင့်ထောက်ပံ့လူနာရဲ့ရောဂါသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာဆရာဝန်မှသတင်းပို့, နှင့်ကုသမှုသို့မဟုတ်ဆေးဖို့လိုတဲ့သဘောထားကို.
အရေးပေါ်သရုပ်ခွဲဖြစ်ကြောင်းနည်းစနစ်နှင့်ကုသမှု execute, စီးနင်းနေစဉ်အတွင်း, ထိုကဲ့သို့သောစို့အစာအိမ်အဖြစ်, လေကြောင်းစစ်ဆင်ရေး, သို့မဟုတ်နှလုံးသွေးကြောခြေရာခံခြင်း.
မူးယစ်ဆေးဝါးများ Render, ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်နှုတ်, သို့မဟုတ်ဆေးသမားရဲ့လမ်းကြောင်းအောက်မှာသွေးကြောသွင်းနည်းစနစ် execute.
အခွအေနေအကြောင်းအသေးစိတ်ကမ်းလှမ်းရန်လူနာဧည့်ခံပြင်ဆင်ထားရန် core ကိုဝန်ထမ်းသို့မဟုတ် dispatch နှငျ့ဆကျသှယျ, သို့မဟုတ်ပင်နောက်ထပ်ကုသမှုရောဂါပျောက်ကင်းဘို့လမ်းညွှန်မှုဆည်းပူးဖို့.
သွယ်တန်းခြင်းနှင့်လူနာတင်ကားသယ်အပေါ်တည်နေရာတစ်ဦးချင်းစီ Immobilize, backboard သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင်းလျှောက်ထားကျောရိုးရွေ့မှုစနစ်.
အထူးသဖြင့်ပွဲချင်းပြီးမှဆဲလ်အထူးကြပ်မတ်စောင့်ရှောက်မှုကုန်ပစ္စည်း Push, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြောင်းဘေးအန္တရာယ် dispatch ထံမှအောက်ပါညွှန်ကြားချက်.
sufferersA အရေးပါသောအသုတေသနနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းရှိသည်ဖို့ကုသမှုစင်တာဝန်ထမ်းနှင့်အတူ Organize, အကျပ်အတည်း၏သာဓကဆုံးဖြတ်ရန်, လည်းအရေးပေါ်ကုသမှုပေး.
အသိအမှတ်ပြု licensure ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပညာရေးသင်တန်းများတက်ရောက်ရန်, လယ်ပြင်အတွင်းပိုင်းအသစ်များကိုဖြစ်ကြောင်းတိုးတက်မှု၏အသိပေးထားသောစောင့်ရှောက်, သို့မဟုတ်တည်ဆဲကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုစောင့်ရှောက်.
Active ကိုနားထောင်ခြင်း-ရန်အခြားသူတွေစုစုပေါင်းအာရုံကိုထောက်ပံ့အခိုင်အမာအဘယျသို့, created ခံရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီး, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးမြန်းမေးမြန်းချက်, အစားမလျော်ကန်သောဖြစ်ရပ်မှာလမ်းပြနေထက်.
သို့ချဉ်း ကပ်. -ရွေးချယ်ခြင်းသင်ယူခြင်းနှင့်အခြေအနေကညွှန်ကြားချက်သို့မဟုတ်လတ်ဆတ်ဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းများကိုလေ့လာသင်ယူတဲ့အခါမှာအဘို့အသင့်လျော်သည့်လေ့ကျင့်ရေး / သင်ခန်းစာနည်းစနစ်များနှင့်ကုသအသုံးချဖို့.
-ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ MonitoringOREvaluating ထိရောက်မှု, အပိုဆောင်းတစ်ဦးချင်းစီ, သို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်မှုအောင်သို့မဟုတ်ကုစားလုပ်ရပ်များယူ.
လူမှု othersI တုံ့ပြန်မှုမသိမဟုတ်သိနားလည်နိုင်စွမ်းကို-ဖြစ်ခြင်းနှင့်သူတို့လုပ်ပေးအဖြစ်သူတို့ပြုမူအဘယ်ကြောင့် သိ..
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. control-ထိန်းညှိခြင်းလုပ်ရပ်များ’ အပြုအမူ.
တစ်ဦးချင်းစီကို enable မဟာဗျူဟာများရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေကုမ္ပဏီအရှေ့တိုင်းဆန်-ကွိုးစား.
စစ်ဆင်ရေးအကဲဖြတ်-စဉ်းစားထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များနှင့်တစ်ဦး layout ကိုထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
ပစ္စည်းကိရိယာရွေးချယ်ရေး-ကိုစူးစမ်းတဲ့အလုပျ execute ဖို့လိုအပ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများအမျိုးအစား.
installation-Installing အစီအစဉ်များ, စက်, cabling, လိုအပ်ချက်များကိုတက်ဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများ.
မြောက်မြားစွာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုများအတွက် encoding-ရေးသားကွန်ပျူတာ applications များ.
စစ်ဆင်ရေးစောင့်ကြည့်-အကဲခတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, စမ်းသပ်မှုများ, သို့မဟုတ်အခြားအညွှန်းကိန်းသင့်လျော်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့စက်လည်းမရှိသေချာစေရန်.
devices များသို့မဟုတ်နည်းလမ်း function နှင့်ထိန်းချုပ်ရေး-မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာလုပျထုံးလုပျနညျး.
ပစ္စည်းကိရိယာပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် upkeep ကို Maintenance-ပွုလုပျခွငျးအခါဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် upkeep ဘယ်လိုလိုအပ်သောဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်.
troubleshooting-ကိုစူးစမ်းလည်ပတ်ပြဿနာများနောက်ကွယ်မှအကြောင်းရင်းများကြောင့်မဆိုနှင့် ပတ်သက်. သွားကြဖို့အဘယ်အရာကိုဦးတည်ချက်အဆုံးအဖြတ်.
ပြုပြင်တာတွေ-ကိုပြုပြင်တာတွေပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးချဖို့ devices များ.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးသုတေသန-ပွုလုပျခွငျးစစ်ဆေးမှုများနှင့်ပစ္စည်းများစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ, ပံ့ပိုးပေး, သို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးအရည်အသွေးကိုသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ဖို့.
systems ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လမ်းပြောင်းလဲမှုများကိုအားသုံးသပ်ခြင်း-ကိုစူးစမ်း, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, နှင့်အခွအေနရလဒ်များ impact နိုင်ပြီးတစ်ဦးဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်ဘယ်လို.
အကြောင်းအရာပိုင်ဆိုင်မှုများ-Discover ၏ကြီးကြပ်မှုနှင့်ဂီယာ၏သင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုအတွက်လက်ခံရရှိ, အဆောက်အ, နှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့.
ဝန်ထမ်း၏စစ်ဆင်ရေးအားတက်စရာအရင်းအမြစ်များ-ထူထောင်, သူတို့လုပ်ကိုင်နေသောကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုဦးဆောင်, အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးကလူကိုဖျောထု.
Link ၏ဒီပလိုမာ (သို့မဟုတ်နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ဒီဂရီ)
တည်မြဲခြင်း – 93.01%
Initiative – 91.39%
အမိန့် – 93.21%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 95.38%
အခြားသူများနှင့်စပ်လျဉ်းကိစ္စ – 94.78%
လူမှု Alignment – 93.68%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 96.49%
စိတ်ဖိစီးမှုစာနာထောက်ထားရေး – 96.90%
မှီခို – 94.32%
အနက်ပေါ်အာရုံစူးစိုက် – 94.61%
ကျင့်ဝတ် – 93.60%
လွတ်လပ်ရေး – 93.62%
သစ်လွင်မှု – 92.73%
analytical အတွေးအခေါ် – 91.87%
Pingback: Tips Exactly How To To Thought Of A Home Health Nurse